Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Naughty or Nice? Loluphi Uluhlu Abaza Kufika kulo ngoku?
Kuninzi okubhaliweyo malunga nerekhodi yemfuno yeeholide kulo nyaka. Uphando lobunikazi beCreo Advisors luqaqambisa iindlela eziphambili eziza kwahlula abathengisi abonwabileyo kakhulu kwabo baphoxekileyo ngeli xesha leeholide. Ngelixa izigqibo ezininzi zivaliwe, ukuphunyezwa kweentsuku ezingama-37 zokugqibela ngaphambi kweholide kuya kudlala indima enkulu kunesiqhelo ngenxa yeepatheni zokuthenga abathengi kunye nemingeni yokubonelela.
Izinto eziphambili ezithathwa kuphando lwabathengi ziquka:
• Abathengi abakhange bakutsalele phambili ukuthenga ngeeholide. Enyanisweni, abathengi baxela ukuba malunga ne-7% ngasemva kwinqanaba lenkcitho vs. kunyaka ophelileyo ukususela ekuqaleni kukaNovemba
• Ukunqongophala kwe-inventri okunokwenzeka kuya kuchaphazela ukuziphatha okukhokelela kutshintsho olungaphezulu kwe-60 yezigidigidi zeedola kwinkcitho phakathi kwabathengisi ngeli xesha leeholide
• Ngelixa ngaphezulu kwe-85% yabathengi beceba ukuya evenkileni bayokuthenga, balindele ukuba amava aya kukala i-4.5 kwi-10
• Ukujongana nemfuno engahambelaniyo, imiqobo emininzi, kunye nolindelo oluphantsi kuya kufuna inqanaba elilandelayo lobuchule kunye nokuphunyezwa. Nangona kunjalo, imivuzo ibalulekile kubathengisi abaphumeleleyo
Imfuno yeHolide kunye nexesha
Phantse zonke iimpawu zemfuno kwimarike zalatha kwiholide 'kanye kwisizukulwana'. Kuphando lwethu lobunikazi olusekelwe kwi-4-12 kaNovemba ka-2021 (N=2,519), malunga ne-26% yabaphenduli abakhange baqalise ukuthenga ngeholide ukususela ekuqaleni kukaNovemba walo nyaka xa kuthelekiswa nama-22% kulo nyaka uphelileyo. Lilonke, abathengi banika ingxelo yokuba bane-7% engaphantsi kokuthenga kwabo ngeeholide kulo nyaka xa kuthelekiswa nenqaku elifanayo kunyaka ophelileyo. “Lo ibingunyaka oxakekileyo nonzima kubathengi. Ukulibaziseka kokuthenga, kudityaniswe nomthengi osempilweni yezemali, umnqweno wokubhiyozela iholide eqhelekileyo, kunye nezinye izinto ziya kukhokelela kwimfuno ephezulu kwezi veki zi-5½ zizayo, utshilo uRichard Vitaro, uMlawuli oLawulayo, abacebisi beCreo. Ukongeza, uphando lwethu luqaqambisa ukhetho lwedijithali kunye nemveli yemidiya, enokuthi ixhaswe ukufikelela kubathengi kweli nqanaba lonyaka.
Imingeni yoBonelelo kunye neMfuneko yokuThatha Amathuba
Inkxalabo ekhulayo malunga nekhonkco lonikezelo lwehlabathi iyaqhubeka nokunyuka njengoko siqala ukuva iziphumo zokulibaziseka kwempahla yeholide kuwo wonke amashishini. Ngokophononongo lwethu, ukunqongophala kwe-inventri kuya kuqhuba malunga ne-7% ukujikeleza kwiintengiso kule holide, eya kuzuzwa ngabo bathengisi abanezikhundla eziqinileyo okanye banokukhokela abathengi kwiindlela ezizezinye ezamkelekileyo. Silindele ukuba kuya kubakho ngaphezulu kwe-60 yeedola ze-B kwingeniso ethinjiweyo ngabo banolwabiwo oluluqilima lwe-inventri, kunye nabanye abathengisi ekunokwenzeka ukuba bajongane ne-inventories ene-bloated emva kweholide njengoko isitokhwe siqhubeka nokuhamba. USteve Vielmetti, uMlawuli oLawulayo kwiCreo Advisors, uthi, "Abathengisi kunye nabavelisi abaye bathatha umngcipheko ngakumbi ngolwakhiwo oluphucukileyo okanye banamakhonkco okubonelela nge-nimble ekukhokeleni umthengi kwiindlela ezizezinye ezamkelekileyo okanye asabele ngokukhawuleza ekubekeni kwakhona iiodolo okanye isitokhwe, baya kuphumelela ngeli xesha. ” USteve wongeza, "Ngaphaya kweholide, iinkampani kufuneka ziye 'kwikhonkco lokubonelela ngobuchule' elichazwe ngamaqabane abekwe ngokufanelekileyo kunye nempahla, kunye nokwamkelwa kwezixhobo zokucwangcisa eziphambili eziphakamisa idatha efana nemibuzo yewebhu, ukuhamba, kunye nezinye iimpawu zangaphandle ukuqhuba. ukusebenza ngexesha lokwenyani kunye nobuchule. ”
Uvavanyo lwethu lubonisa ukuba ngaphezulu kwe-85% yabathengi baceba ukuya ezivenkileni ngenxalenye yohambo lwabo lokuthenga kule holide, kodwa bathe phithi ngamava. Ukongeza, indawo yevenkile iye yantsonkotha ngakumbi ngokuhamba kwexesha nge-BOPIS, iCurbside, iiprothokholi zeCovid, kunye nezinye izinto ezininzi.
Nangona izigqibo ezininzi sele zenziwe, abathengisi basenalo ithuba lokuqhuba iziphumo ze-~75% eseleyo yeentengiso zeeholide. Ukuphucula i-algorithms yedijithali, ukubeka intengiso yemveli, ukuqhuba ukubandakanyeka kwabathengi kunye nokunyaniseka, ukuqinisekisa abasebenzi abaneleyo bevenkile, kunye nokubeka uluhlu olukhoyo olukhoyo ngobuchule kuya kunceda ukuqhuba iziphumo ezinamandla eziphezulu kunye nezantsi kweli xesha lonyaka. Ezo zenzo zenziwa bubunkokeli obunobuceducedu, ulungelelwaniso lombutho, ubuchule, kunye nohlalutyo. Ngenxa yokudityaniswa kwemfuno eyomeleleyo yabathengi kunye ne-inventri ebanzi kunye nemingeni yabasebenzi, abathengisi abaqhuba kakuhle kule holide baya kuvuna imivuzo ebalulekileyo. Ukongezelela, abathengisi bezakhono abazisebenzisayo ngeli holide baya kwakha amandla ombutho, abanokuthi basebenzise i-2022 nangaphezulu.